www.xamarcade.com » Maxkamadda Minneoples oo dambi ku heshay Askari xad gudub u geystay Soomaali
Maxkamadda Minneoples oo dambi ku heshay Askari xad gudub u geystay Soomaali
Maxkamad ku taalla magaalada Minneoples ee dalka Mareykanka ayaa dambi ku heshay Askari cadaan ah oo xad gudub jirdil la xiriira u geystay nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Maxamed Cusmaan.
30-kii May ee sanadkii hore gabar Soomaaliyeed ayaa Booliska waxa ay uga dacwootay Maxamed Cusmaan oo ay sheegtay in uu u gacan qaaday.
Booliska ayaa si deg deg ah ku yimid guriga gabadha xilligaasi waxaa gaari guriga hortiisa yaallay ku dhexjiray Maxamed Cusmaan, oo Booliska ay ku amreen in jilbaha uu dhulka dhigto, kadibna gacmaha uu gadaal mariyo.
Askari Boolis ah oo lagu magagaacbo Cristover River oo 36 sano jir ah ayaa Maxamed Cusmaan oo jilbaha ay dhulka u yaallaan darbeeyay, kadib Maxamed ayaa miir belay oo uu soo gaaro dhaawac uu ka mid yahay inuu sanka ka jabo.
Askarigii ayaa shaqada laga fariisiyay, waxaana la daawaday muuqaal ay duubtay Camerada qarsoon, shalay oo aheyd Talaado ayay Maxkamaddu sheegtay in Askarigan uu qalad galay, dambina lagu helay.
Ilaa hadda Maxkamadda ma aysan sheegin xukunka dhabta ah ee ay ku riday Askarigan, balse ilaa gaba gabada Todobaadkan ayaa la ogaan doonaa xukunka lagu ridi doono Askariga.
Xeer ilaaliye ka tirsan Maxkamadda Minneoples ayaa codsaday in ninkan xabsi loo taxaabo, inkastoo hadalkaasi ay ka soo horjeesteen qareenada u doodaya Askariga, iyaga oo dalbaday in uu banaanka joogo, korna lagala socdo.